KUUSAA AFOOLA OROMOO KEESSAA -Itttiin nuuf bohaaraa – Beekan Guluma Erena
KUUSAA AFOOLA OROMOO KEESSAA -Itttiin nuuf bohaaraa	Beekan Guluma Erena
AFOOLA/OROMO FOLKLORE May 10, 2016May 10, 2016OROMO
127SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
MARAROOAfoola Oromoon bashannanaa–
Mararoon damee afoola Oromoo keessaa isa tokko yoo ta’u, gama dhiiraatiinis ta’e kan dubaraatiin walaloo humna garaa nama raasu kan qabuudha. Haalli dalagaasaas (ittiinsirbamu) ta’e ergaansaa miira namaa kan kakasuufi yaada gaddaa namatti naqee kan nama boosisuudha. Yeroo baay’ee mararoon dubaraa meeshaa aadaa dibbeedhaan waa’ileeffamee waan dhihaatuuf daran miidhagaadha.
Akka irranatti eeruuf yaalametti sirna fuudhaafi heeruma naqataa keessatti intalliifi gurbaan kan walfuudhan fedhii maatiisaaniitiin yookiin fedhii waliisaaniitiin ta’uu danda’a. Yeroo baay’ee garuu keessumaa gama
dubaraatiin fedhiinshee eegamaafi hinturre (amma haalonni jijjiramaa jiraatan iyyuu). Maarree dubarri tokko osoo isheen hinbarbaadin yommuu heerumsiisan komeeshee mararoodhaan ibsatti. Kana
garuu kan ibsattu fuulaa fuulatti osoo hintaane guyyaa kennaa hiriyyootashee waliin dhoksaadhaan gara boroo naanna’anii weeddisu. Akka armaangadiitti:
yoo rafteef qalbeeffadhuu…
jechuudhaan quuqqaa garaashee
haaloota sadirratti hundaa’uu ibsachuu
jalqabdi. Haaloonni quuqqaa kunneenis
utuu umrii malee heerumuu, fedhiin ala
horiidhaan jijjiiramuufi walcaalchiisu
ta’uu danda’a. Mee kanneen tokkotokkoon haa ilaallu.
1. Umurii malee heerumuu: Dubarri tokko sababa umrii malee ishee
heerumsiisaniif akkana jettee komeeshee ibsatti.
A) Harmi koo hinbaanee, ni quuqxe
malee,Yaa aayyoolee koo,
na quufte malee,ulee geeshee muruu,
Gaafa kurnookoo malli funyoo koo.
jettee komee maatiisheerraa qabdu
2. Fedhiin ala horiidhaan jijjiramuu: kanas akka armaan gadiitti ibsatti.
A) Waddeessa qe’ee murmurtuu hinseenee,Murmurtaniiree guddiftuu ijoollee?
Haasooftuu qe’ee gurgurtu hinseene, Gurgurtaniiree?
Yommuun ani xinnoo, siree dhodhooftee,
uruuruu jetta, Amma maal goonaan, barcuma
haaxoftee, qarshii lakkooftee, gurguruu
jettaa? Yommuu na biraa dirribee jettaa,
Qarshii qiraacii darbattee keessaa, guchuma keessaa,
Walaloon kun heeruma bittaafi gurgurtaatti fakkeessuun ibsa. Akkuma beekamu gurgurtaa keessatti horiin yookiin meeshaan gurguramu tokko eenyuutti, meeqaaniifi yoom akka gurguramu murteessuuf yaada kennuu
hindanda’u. Intalli mararoo kana weddiftuus heerumni kanarraa adda akka hintaane addeessuudhaan warra gurgurtaa gaggeessan sana komatti fedhiin osoo hinta’iin horiif jecha haala kanaan ishee kennuunsaanii
gurgurtaarrayyuu darbee du’a akka itti fakkaate himatti.
Haa ta’u malee aadaa Oromoo keessatti dubarri hundi haala kanaan heerumti jechuu miti. Garuu fedhiisheerra qabeenyi dhiiraa akka caalu geeraraanyommuu ibsamu ni mul’ata.
Fakkeenyaaf caalmaa abbaa horii
mul’isuuf akkanaan geeraru.
Eegaan burqaan komee durba tokko fedhiidhaan ala horiidhaan jijjiramuu
yoo ta’u inni sadaffaan ammoo walcaalchiisuudha.
3. Walcaalchiisuu:- Aadaa Oromoo keessatti yeroo hedduu ijoollee dubaraarra dhiira caalsifachuun ni calaqqisa. Yommuu dubartiin tokko dhiira deessuufi dubara deessullee gammachuun namonni mul’isan walqixamiti (amma amma jijjiramoonni jiraatanillee). Yommuu weedduu da’umsaa weeddisan illee akkan armaan gadiitti dhiira caalchisuun weeddisu turan.
Jechaa abbaa mucaatiif
gammachuusaanii ibsu. Yommuu
dubarrii dhalatte garuu baga
Kana malees dubarrii heerumtee kan ormaa taati, dhiirimmoo yoo fudheellee
qe’ee warrasaatti hafa jedhanii waan
amananiifis akkana jedhu:
Eegaan dubarri Oromoo walcaalchisa
kana waan beekaniif akka armaan
gadiitti mararoosaanii dhaammatu.
Obboon kan isaanii nummoo maal
Kootiin kan keetii ani maal keetii?
Jechuudhaan dhalootumarraa kaasanii
ishee akka lagaatti akka ilaalaniifi
obboleeshaa warra dhiiraa ofitti akka
aansaa turan dubbatti. Kana malees
obbolaan dhiiraas isheef osoo ho’uu
dhiisanii heerumaaf dabarsanii
kennuusaaniif ni komatti.
Walumaa galatti, haalli dubarri
heerumuuf jettuu mararoodhaan
yaadashee ibsattu garaagara ta’uullee
qabiyyeensaa walirraa fageenya qaba
jennee hin amannu.
Dubbistoonni keenyas naannawa
keessanitti dubarri naannawaa keessanii
heerumuuf jettu akkamiin mararoo akka
dhaaaammattu yoo nuf ergitan ni
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa127SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← MAAL ROOBUUF FULLAATA?—Haala Bara kana –Sabaan Boon Firrisaa’tiin
OROMO GUJII →